Rikoooo.com - Seranam-piaramanidina
Joined: 29 Aogositra 2019, 08:22
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by pip01 » 19 Sep 2019, 02:42
Indraindray, rehefa nifandray tamin'ny tiko amin'ny tompon-tany aho, dia nilaza ny seranam-piaramanidina ankehitriny raha miditra amin'ny seranam-piaramanidina ny IFR hoe inona no dikan'izany?
Joined: 01 Mey 2016, 23:06
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Nitrical » 19 Sep 2019, 06:48
Midika izany fa tsy avela hidina ambanin'ny VFR ianao. (Fitsipika ara-pifandraisana) Nahita aho fa mitranga amin'ny toetrandro ratsy (farafaharatsiny ao anatin'ny loziko)
Mamorona fiaramanidina, safidio ny IFR. Azonao atao izany amin'ny sidina, alao antoka fotsiny fa misafidy "tsia" ianao raha anontaniana raha te-hametraka ny fiaramanidina amin'ny seranam-piaramanidina fiaingana ny sim.
Aorian'izany dia manaraka ny toromarika ATC ihany ary afaka mahazo alalana ianao.
Fototry ny 2 ianao rehefa manomboka sidina. Tsy misy fiaramanidina noheverina ho VFR, amin'ny tena fiainana dia midika izany fa tsy maintsy mijanona ao ambanin'ny haben'ny rano ianao (4500ft ho an'ny Belzika sy ny ankamaroan'ny firenena ary ny hafainganam-pandehan'ny 140kt IAS). . FSX tsy miraharaha an'izany.
IFR (Volavolan-dalambe momba ny sidina) dia midika fa handeha amin'ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny ATC ianao. Raha tsy manaraka ny torolalan'izy ireo ianao dia ho nofoanana ny IFR. In FSX / P3D fototra tsy azo ianteherana io manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Raha lavitra dia lavitra izy ireo dia hangataka anao hanohy amin'ny fitetezana azy manokana, fa raha manakaiky ny toerana dia hitari-dalana anao izy ireo. Aza hadino fotsiny ny hamindra ny sehatra ATC raha angatahana amin'ny alàlan'ny menu menu ATC mandritra ny sidina na ny IFR dia hajanona indray.
Tsy haiko raha misy fahasamihafana maro eo FSX ary P3D raha resaka ATC. Ny laharako RTX2070 dia nanapa-kevitra ny ho faty tsy ho ela taorian'ny fanatsarana ny P3D, ka tsy hitako ny mahasamihafa azy FSX ary P3D